‘Tsy hanampina ny vavako raha izay fampiatoana’: Tanora miteny taorian’ny nanisihana hafatra momba ireo Uyghurs ao Xinjiang tao anaty fampianarana ankosotra TikTok · Global Voices teny Malagasy
'Azafady fantaro. Azafady aelezo izao ny fampahafantarana ny ao Xinjiang.'
Voadika ny 16 Janoary 2020 12:57 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Ελληνικά, Español, عربي, Esperanto , English
Pikantsary avy amin'ilay fampianarana ankosotra nataon'i Feroza Aziz. Tao amin'ny fantsona Youtube HKFP.
Tany am-boalohany dia i Holmes Chan sy Tom Grundy no namoaka ity lahatsoratra ity ary naverin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 27 Novambra 2019. Ny dika eto ambany dia navoakan'ny Global Voices noho ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Tanora iray niresaka momba ny zava-mahonena manjo ireo Uyghurs ao Xinjiang no nanao fanamby tamin'ilay TikTok, fampiharana anaty media sôsialy an'ny shinoa, noho ilay fanapahankevitry ny TikTok hanakana azy tsy hamoaka votoaty vaovao.
Feroza Aziz, 17 taona, no nameno ny lohateny lehiben'ny gazety tany am-piandohan'ny herinandro rehfa namoaka lahatsary iray manome ny antsipirihany momba ny fitondran'ireo shinoa manampahefana an'ireo Uyghur. Nataony izay fomba handinganana ny rafitra fandrindràna votoaty ataon'ny TikTok, tamin'ny famadihana ireo rakitsary ho toy ny “fampianarana manao ankosotra.”
Ny 27 Novambra, nambaran'i Aziz tamin'ny HKFP fa mba handrenesana ny hafatra avy aminy dia nohararaotiny ny fankafizana haingo ananan'ireo mpijery fahitalavitra. Maherin'ny iray tapitrisa ireo “Tia” azon'ireo lahatsary napetraka tao amin'ilay sehatra sôsialy malaza, ary ireo dika avy aminy napetraka any amin'ireo sehatra hafa dia efa voajery an-tapitrisa ihany koa.
Nabomboka teo i Aziz no voasakana tsy hahazo mamoaka votoaty ao amin'ny TikTok intsony, na dia nisy mpitondrateny avy amin'ilay orinasa aza nilaza tamin'ny BBC News fa “tsy noho ny antony politika saropady akory no andrindràny ny votoaty.” Ilay fampiharana – fantatra amin'ny hoe Douyin ao amin'ny tanibe Shina ary atao hoe TikTok kosa manerana izao totolo izao – dia an'ny orinasa shinoa Bytedance, manana ny foibeny ao Beijing. Hoy i Aziz :
Fantatro fa raha atomboko aminà lahatsary iray fampianarana manao ankosotra, dia ho liana hijery ny olona avy eo. Avy eo tsapako fa io hevitra io no tokony ampiasaiko hanafenana ireo lahatsariko satria ho tonga amin'olona marobe izy nefa ny TikTok tsy [haharaka] hahita hoe momba ny governemanta mpanao kolikoly ao Shina no resahako.
Ao anatin'ilay lahatsary miparitaka be, natombok'i Aziz tamina torolàlana vitsivitsy momba ny fampiasàna ny fitaovana famolahana sy fanetezana volomaso, alohany angatahany amn'ireo mpijery hampiasa ny finday mba hikarohana mikasika izay manjo ireo Uyghurs ao Xinjiang:
ny fomba nanaovan-dry zareo toerana fanatobiana, fandefasany ireo Miozolmàna tsy manantsiny any, ny famotehany ny ankohonana, ny fakàna an-kery azy ireny, ny famonoana azy ireny, ny fanolànana, fanerena azy ireny hihinana kisoa, hisotro toaka ary hivadika finoana […] Holocaust (Famonoana Tambabe) iray hafa io, nefa tsy mbola misy olona miresaka momba izany. Iangaviako ianareo mba tsarovy. Azafady indrindra aelezo dieny izao ny fampahafantarana ny ao Xinjiang.
Nantsoin'i Aziz, safiotra Afghana-Amerikàna, ireo mpitondra erantany mba hanao hetsika “hampitsahàrana ny fahafatesan'ireo olona tsy manantsiny” sy hiatrehana ireo olana amin'ny maha-olona:
Amin'ny maha-Miozolmàna ny tenako, efa niharan'ny fanavakavahana sy ny fitsaratsarampoana aho. Nitombo tao anaty vondrompiarahamonina Jiosy koa aho, araka izany dia nahatsiaro foana ilay Famonoana Tambabe sy fandripahana natao tamin'ireo Jiosy nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. […] Taorian'ny nahalalako ny momba io olana io, fantatro fa tsy maintsy miloa-bava aho momba an'io, satria raha tsy niteny aho, iza no hanao izany?
Nilaza i Aziz fa natao hanairana ny saina ireo lahatsariny, ary niabo ny ankamaroan'ny fandraisana azy tety anaty media sôsialy.
Fandraràna ‘mampiahiahy fatratra’
Na mbola tavela ao amin'ny TikTok aza ilay lahatsary fampianarana ankosotra, ny 26 Novambra dia nilaza i Aziz fa no raràna tsy ho afaka mamahana lahatsary vaovao ao mandritra ny volana iray izy, saingy nampiany hoe : “Tsy hanampina ny vavako izany.”
Ny 15 Novambra, nobahanan'ny TikTok ilay kaontin'i Aziz fahiny, noho ny filazana azy ho nandefa lahatsary tsy misy ifandraisany velively amin'izay nambara ho fanitsakitsahana ny lalàna momba ireo votoaty manindrahindra asa fampihorohoroana, ary nobahanana ihany koa ny ‘smartphone’ fampiasany tamin'ny 25 Novambra, araka ny nambaran'ny BBC News.
Voabahana tsy mahazo mandefa zavatra ao amin'ny TikTok aho mandritra ny volana iray. Tsy hanampina any vavako izany
Ny lahatsary teo aloha dia nampiseho an'i Aziz naneho hevitra momba ny famoronana natao ho an'ireo olomalaza avy ao Kaokazy, misy maribolana iray hoe “izaho ilay tsy tia afa-tsy lahy fotsy fihodirana tany amin'ny kolejy”. Avy eo ilay lahatsary miampita mankany aminà famoronana ahitàna ireo lehilahy tsy fotsy fihodirana narahana maribolana hoe “izaho amin'izao fotoana izao”. Mifarana aminà sary mampihomehy ahitàna an'i Bin Laden ilay lahatsary.
Nambaran'i Aziz tamin'ny HKFP fa ilay lahatsary dia natao ho toy ny “sangy ratsy” sy “hanihany manohina an'ireo izay nilaza tamiko sy ireo Miozolmana hafa rahalahiko fa hoe tokony ho mpampihorohoro no hovadiako”:
Amin'ny maha-Miozlomàna Amerikàna ahy nitombo tao anaty fiarahamonina azo ambara ho fotsy fihodirana tanteraka, nandritra ny androm-piainako aho no notebahana noho ny finoako. Nilazàna aho mba handao ny firenena, handeha handaroka baomba firenena hafa, na handeha hanambady mpanao asa fampihorohoroana.
Nanapaka hevitra aho, maninona no tsy raisiko ireny fanamarihana miiba sy feno fanavakavahana atao ahy ireny, ka avadika ho lahatsary mampihomehy ahafahan'ireo Miozolmàna maro kokoa mba mihomehy, satria ny zavatra marina dia izao, miatrika fitsaràna an-tendro tahaka izany ihany koa ry zareo.
Lazain'ny TikTok fa tsy noho ny fanakianana atao an'i Shina ilay fandraràna. Ilay kaontiny taloha, hoy izy ireo, tamin'ny 15 Novambra, dia nandefa lahatsary misy an'i Osama bin Laden, nitarika nankany amin'ny fibahanana ny findainy. Nolazain'i Aziz fa vazivazy mibaribary momba ny fanavakavahana atrehany amin'ny maha-Miozolmàna azy ilay lahatsary, ary nozarainy ho antsika ilay lahatsary: pic.twitter.com/5w7WpV2gB9
Nampian'i Aziz fa “mampiahiahy fatratra” ny fitanisàn'i TikTok ilay lahatsariny efa tranainy be ho toy ny antony nampiatoana azy satria, na ilay lahatsary, na ilay kaontiny efa tranainy, dia samy efa nofafàna avokoa.
Namorona [kaonty] iray vaovao aho ary tsy namerina nandefa velively lahatsary misy an'i Bin Laden mety hoe nanafintohina olona. Fa nony injay nandefa momba ilay toerana fanibohana ao Shina dia naato, momba lahatsary iray izay nataoko nefa efa nofafako tany aminà kaonty iray hafa izay efa nofafako ihany koa ve? Tena tsy misy dikany an !
Farany androany 28 Novambra, namoaka fialantsiny ho hitan'ny daholobe ilay orinasa sady namerina ny kaontin'i Aziz. Nefa nilaza ilay mpandefa bilaogin-dahatsary fa tsy nividy ny fialantsinin'ny Tiktok izy:
VAOVAO MAFANA: Namoaka fialantsiny ho hitan'ny daholobe ny Tiktok sady namerina ny kaontiko. Tokony hino ve aho hoe noho ilay lahatsary mananihany tsy nisy nifandraisany ary efa nofafako tany amin'ireo kaontiko taloha efa nofafàko no nanaovan-dry zareo an'izao? Indrindra fa vao avy nandefa lahatsary iray misy ampahany 3 aho, momba ireo Uyghurs? Tsia.
Ny vondrom-poko Uyghurs izay ny Miozolmàna no be indrindra ao anatiny dia anisan'ireo vitsy an'isa atao lasibatra amin'ilay antsoin'i Beijing hoe fampielezankevitra hiatrehana ny korontana sy ny mpitaky fisintahana. Lazain'ny Firenena Mikambana fa an-tapitrisa ireo Uighurs no tazonina tsy an-drariny any anatin'ireo “toerana fanarenana ara-politika” ivelan'ny lalàna, raha ny Human Rights Watch indray kosa mitatitra hoe nitombo be tsy nisy toa izany ny fanarahamaso sy ny famoretana ao Xinjiang nanomboka tamin'ny 2016.
Ambaran'ilay ONG fa angonina ny raikitra ‘biômetrika’ tany amin'ireo mponina, giazana ny pasipaoro, ampiharana teritery ny resaka finoana, “lavabe tsy toy ny mahazatra” ny volombava, raràna ireo vavaka iarahan'ny maro sy ny firakofana salotra (voaly), ary noterena nametraka fitaovana fitsongoana dia kosa ireo tomponà fiara sy telefaona finday.